ထမနဲ ထိုးနည်း ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ပါတယ် ( စကားချပ် )
(၂ )မြေပဲ.......................(၈၀) ကျပ်သား..
(၄) နှမ်းစေ့( မဲ+အဖြူ )......(၃၂) ကျပ်သား
(၅) အုန်းသီးစိတ်..............(၂၀) ကျပ်သား..
(၆) ဆား.........................(၇) ကျပ်သား.
(၇) ချင်း..........................(၁၅) ကျပ်သား
ထမနဲ မထိုးခင် ကောက်ညှင်းဆန်တွေကိုရေဆေးပြီးအနည်းဆုံး (၃) နာရီခန်.
မြေပဲတွေကို လှော်ပြီးအခွံတွေပြောင်စင်နေအောင်သန်.စင်ပါ ။ ၂ ခြမ်းကွဲသွား
နှမ်းတွေကိုလည်း သန်.စင်ပြီး(လိုအပ်ပါက) လှော်ထားပါ။
အုန်းသီးတွေကို အနေတ်ာပါးပါးလှီးစိတ်ပါ ၊ ကြော်ပြီးထည့်မယ်ဆိုရင် နေပူမှာ
ပထမဆုံး မိုးဗြဲဒယ် မှာဆီကိုအပူပေးပြီး အုန်းသီးတွေကိုရွှေအိုရောင်ရအောင်
ထိုဆီထဲမှာပဲ ချင်းကို ဆီသတ်ပါ ။ အနံ.မွှေးပြီးနွမ်းလာလျှင် ရေစစ်ထားတဲ့
ပါ ( ကြော်ချင်ဟန်ပြု ပါ )
ကောက်ညှင်းဆန်အထက် ရေ လက် ၂ ဆစ်ခန်.ထည့်ပြီး..စကောကြီးကြီးများ
ကိုလက်ကိုင်ကွင်းတပ်ထားသောအဖုံးများနှင့် ဖုံးထားပါ ။
ရေမခမ်းခင်အထိတော့ (၁၀ ) မိနစ်တစ်ခါလောက်ယောင်းမနဲ.နှံ..အောင်မွှေ
အဖုံး ၊ ဖုံးကာ နှပ်ပေးရပါမယ်...။
ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက စမ်းသပ်ပြီးလို.နှပ်ပြီဆိုကာမှ သစ်သားယောင်းမကိုင်
ထိုအချိန်မှပဲ အိုးသူကြီးညွှန်ကြားချက်အတိုင်း နှမ်း ၊ မြေပဲ ၊ အုန်းသီးကြော်(သို.) အစိမ်းများကို ထည့်ကာ သမသွားအောင်နယ်ပေးပါမှ..
ကောင်းမွန်တဲ့ ထမနဲ ကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်..။
တွေတည်ဖို. မြေကြီးကို တွင်းတူးပြီး အုတ်နီခဲများနဲ.ခနောက်ဆိုင်ပြုလုပ်ကာ
ဒီလိုပြုလုပ်တာဟာ မီးအရှိန်ကြောင့်လူပင်ပန်းမှုကိုသက်သာစေသလို လေတိုက်နှုန်းတွေကြောင့်မီးညွန်.တွေမလှုပ်ရှားစေပဲ
ကြိတ်ချေသူကိုပါ သက်သာစေသလို မုန်.ကိုလည်းမိမိလိုချင်တဲ့အနေအထား
ထမနဲ ထိုးရန်ဖို.. စာချိုးလို.မှာခဲ့မယ်...
ချင်း( ဂျင်း) က သုံးဆယ်
လက်နှစ်သစ်သာပ ၊ တွက်စစ်ကာချိန်ဆယ်သားရယ်နှင့်
( အမည်မသိ )
photo credit >>> Google Search